Fri, Mar 22, 2019 | 11:44:32 NST
नेपाल र भारतका ट्रेड यूनियनबीच मजदुरको अधिकारका लागि पहल गर्ने सम्झौता
काठमाडौं, कात्तिक २५ — नेपाल र भारतका ट्रेड यूनियनले दुबै देशमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकारका लागि पहल गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार देखि काठमाडौंमा सुरु भएको प्रवासी श्रमिक सम्मेलनमा नेपालको विडव्लुआई आवद्ध समिति र भारतको बिहारमा क्रियाशील हिन्द खेत मजदुर पंचायतबीच सम्झौता भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शर्मा सम्पर्क विहिन
सेञ्छेलुङ लिम्बु/उज्यालो, काठमाण्डौं कात्तिक २४ - पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका दीपेन्द्रनाथ शर्मा सम्पर्क विहिन हुनु भएको छ । ट्रेड युनियनहरुको दबाब थेग्न नसकेर कार्यकारी निर्देशक शर्मा सम्पर्क विहिन भएको श्रोतले जनाएको छ ।
विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी
सेन्छेलुङ लिम्बु/उज्यालो | काठमाण्डौं, कात्तिक २३ - ११ वर्षदेखि यथावत रहेको विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा केहि थपघट गरी महशुल वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २३ — सुनको भाउले आज फेरी नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । मंगलबार ५४ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सुन बुधबार पाँच सय रुपैयाँ बढेर अहिलेसम्मकै बढि तोलाको ५५ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
सडक निर्माणमा अनियमितता गर्ने इञ्जिनियरसँग प्रशासनद्वारा १२ लाख धरौटी माग
नेपालगन्ज, कात्तिक २३ — नेपालगन्ज नगरपालिकाको गणेशपुरमा सडक कालोपत्रे गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नगरपालिकाका इञ्जिनियर कर्ण बहादुर केकेसँग १२ लाख रुपैँया धरौटी माग गरेको छ । अख्तियारको बाँके युनिटले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितिता भएको पाईएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेले केकेसँग १२ लाख रुपैया धरौटी माग गर्नुभएको हो ।
भ्याटमा दर्ता नभएका ६६ ईटा भट्टालाई कारवाही गरिने
भक्तपुर, कात्तिक २३ — आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएका जिल्लाका ६६ वटा ईटा भट्टामाथि कारवाही गर्ने भएको छ । वार्षिक एक अर्ब भन्दा बढीको कारोवार गरेपनि अझै भ्याटमा दर्ता नभएकाले अर्को महिनादेखि कारवाही शुरु गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
बजार अनुगमनको काम फेरि ठप्प
काठमाडौं, कात्तिक २३ — दशैँ तिहारको बेला तिव्रता पाएको बजार अनुगमनको काम हिजो आज ठप्प भएको छ । तिहारअघि सम्म दिनको सरदर तीन ओटा सम्म टोली बनाएर हिँड्ने वाणिज्य विभागका कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन उल्लंघन गर्ने २ भारतीय जेल चलान
काठमाण्डौं, कात्तिक २२ - सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन उल्लंघन गरेको अभियोगमा २ जना भारतीय नागरिकलाई जेल चलान गरिएको छ । स्रोत नखुलेको पैसा सहित पक्राउ परेका भारतको विहार मधुवनी जननगरका सुनील जयसवाल र श्रवण साहलाई बिशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल चलान गरिएको हो । उनीहरुलाई स्रोत नखुलेको २८ लाख ४० हजार नेपाली रुपैयाँ सहित राजस्व अनुसन्धानले धनुषाबाट पक्राउ गरेको थियो । विशेष अदालतले सुनील जैसवालसित १९ लाख २० हजार र श्रवण साहसित ९ लाख २० हजार धरौटी मागेको थियो । तर दुबैले धरौटी बुझाउन...
काठमाण्डौं, कात्तिक २२ - सुनको भाउले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । हिजो ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सुन आज १ हजार रुपैयाँ बढेर अहिलेसम्मकै बढि तोलाको ५४ हजार सात सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि सुनको भाउ ५४ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ ८० प्रतिशत प्रगति
सेञ्छेलुङ लिम्बु/ उज्यालो - गत आर्थिक वर्षमा संचालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फ ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा संचालित पहिलो प्राथमिकताका विकास आयोजनातर्फ ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको जनाएको हो ।
मुग्लिनका होटलमा मूल्य सूचि राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
मुग्लिन, कात्तिक १९ — प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत मुग्लिन बजारका होटल तथा रेष्टुरेण्टको आकस्मिक निरीक्षण गर्नुभएको छ । शनिबार बिहान गृह जिल्ला गोरखा जाने क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुग्लिनको थकाली भान्छा घर र रुप्सी रेष्टुरेण्ट एण्ड लजको निरीक्षण गरी मूल्यसूची राख्न र सरसफाईमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।
सुर्य नेपाल व्यवस्थापनकै कारण बन्दः संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष
माधव दुलाल/ उज्यालो । कात्तिक १८ — संसदको अर्थ तथा श्रम सम्वन्ध उपसमितिले विराटनगरको सुर्य नेपाल गार्मेन्ट प्रालि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण बन्द भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले गठन गरेको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योग बन्द हुनुको कारण व्यवस्थापकको कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भक्तपुरमा १७ सय लिटर अवैध घरेलु मदिरा नष्ट
भक्तपुर, कात्तिक १८ — आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरले विभिन्न ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको झण्डै १७ सय लिटर अवैध घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर र मातहतका निकायले विभिन्न ठाउँबाट राजस्व कार्यालय भक्तपुरमा बुझाएको मदिरा कार्यालय परिसरमा नष्ट गरिएको कार्यालयका प्रमुख दिपक खरेलले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक यातायातमा बढेको भाडादर आजदेखि लागू, बढी भाडा लिए कारबाही हुने
काठमाडौं, कात्तिक १८ — सार्वजनिक यात्रुवाहक गाडीमा बढेको भाडादर आज देखि लागू गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको भाडा वृद्धिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मिटर जडित ट्याक्सी र स्थानिय रुटका गाडीमा भने हिजो देखि नै भाडा बढाईएको छ ।
उत्पादनमा अखाद्य बस्तुको मिसावट गर्ने भक्तपुरका दुई डेरीलाई कारबाही सुरु
रमेश गिरी/ उज्यालो, भक्तपुर कात्तिक १७ — भक्तपुरको बागेश्वरी गाविसको खरिपाटी रोडमा रहेको कालिका डेरी प्रालि र सैजु डेरी प्रालिलाई खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कारबाही सुरु गरेको छ । विभागले गरेको परीक्षणमा यी दुबै दुध डेरीले उत्पादन गरेको दूधमा आवश्यकता अनुसारको फ्याट नपुगेको र अखाद्य बस्तुको मिसावट भएको पाइएपछि खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
नेप्से घट्यो, बुधवारको वृद्धि सुनियोजित भएको पुष्टि ।
काठमाडौं, कात्तिक १७- बुधवार अप्रत्यासित रुपमा बढेको शेयर बजार परिसुचक नेप्से विहीवार भने घटेको छ । बुधवार १६ दशमलब ६ १ अकंले बढेको नेप्से ३ दशमलब २ ८ अंकले घटेर ३ सय ४३ दशमलब ५४ बिन्दुमा आईपुगेको छ । यसले बुधवारको बृद्धि सुनियोजित रहेको पुष्टि भएको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा बढेको भाडा भोली देखि लागू हुने
काठमाडौं, कात्तिक १७ — सार्वजनिक यात्रुवाहक गाडी र मिटर जडित भाडाका ट्याक्सीको बढेको भाडादर बिहीबारदेखि मात्रै लागू हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बढेको भाडादर आजदेखि लागू हुने बताएपनि यातायात व्यवसायीहरुले भने बिहीबारदेखि मात्रै लागू हुने बताएका छन् ।
नेपाली सामानमा चिनिया उपभोक्ताको आकर्षण
काठमाडौं, कात्तिक १७ — नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा बुधबार देखि सुरु भएको नेपाल–चीन तिब्बत आर्थिक तथा व्यापार मेलामा नेपाली हस्तकला, मूर्तिकला र काष्ठकलाका सामानमा चिनिया उपभोक्ताको बढी आकर्षण देखिएको छ । भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको मेलामा त्यस्ता सामानबारे जानकारी लिने र किन्न नेपाली स्टलमा चिनियाँ उपभोक्ताको भिड बढी देखिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
अक्टोबर महिनामा ईतिहासकै धेरै पर्यटक भित्रिए
कमल पराजुली/ उज्यालो । काठमाडौं, कात्तिक, १६ — गत महिनामा नेपालको ईतिहासमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अक्टोबर महिनामा हवाईमार्ग हुदै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सख्या १६.८ प्रतिशतले बढेका छन् ।
नेप्सेमा सर्किट ब्रेकर
काठमाण्डौं, कात्तिक १६ - धितोपत्र बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको शेयर मुल्य सुचकाँक नेप्से अस्वभाविक रुपमा बढेपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर कारोवार नै बन्द गरिएको छ । १२ बजेर ४४ मिनेट जाँदा १५ मिनेटलाई कारोवार बन्द भएर खुलेको बजार १ बजेर १५ मिनेट जाँदा फेरी आधाघण्टालाई बन्द गरिएको थियो ।
गाडी भाडा ९.९ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, कात्तिक १६ — सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर बढाएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाएको हो ।
काठमाडौं, कात्तिक १४ — आइतबार एक्कासी बढेको सुनचाँदीको भाउ सोमबार फेरि घटेको छ । आइतबार तोलाको ५२ हजार ९ सय रहेको सुन आज घटेर ५२ हजार ३ सयमा कारोबार भैरहेको छ । यस्तै चाँदीको भाउ पनि घटेर तोलाको एकहजार ९० रुपैंयामा कारोबार भैरहेको छ । चाँदी आइतबार तोलाको एक हजार एकसय १० मा कारोबार भएको थियो ।
शिक्षा सेवा कर नबुझाउने विद्यालयलाई कारबाही गरिने
रमेश गिरी/ उज्यालो । भक्तपुर, कात्तिक १४ — आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरले शिक्षा सेवा कर नबुझाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भएको छ । यसवर्ष विद्यालयहरुले शिक्षा सेवा कर नबुझाए पछि राजस्व कार्यालयले शिक्षा सेवा कर संकलनमा कडाई गर्ने भएको हो ।
भ्याट छल्ने ४ सय ३७ कम्पनीको नाम सार्वजनिक
काठमाण्डौं, कात्तिक १३ - भ्याट छलेर व्यवसाय गर्दै आएका ४ सय ३७ वटा कम्पनीको नाम अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसरी भ्याट छलेर राजश्व ठग्ने कम्पनीहरुमा जगदम्वा स्टिल्स् सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सिजी ईम्पेक्स सिजी फुड्स छन् ।
गोरखामा ८५ हजार नक्कली नोट भेटियो
भीमलाल श्रेष्ठ/ उज्यालो । गोरखा, कात्तिक १३ — गोरखामा ८५ हजार नक्कली नेपाली रुपैँया फेला परेको छ । गोरखाको उत्तरी गाउँ विकास समिति काशीगाउँमा लागेको एक मेलामा एक हजार रुपियाँको ८५ वटा नक्कली नोट फेला परेको हो ।
सुनचाँदीको भाउ ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौं, कात्तिक १३ — हप्ताको पहिलो दिन सुनचाँदीको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । लक्ष्मीपूजाको दिन तोलाको ५१ हजार सात सय रुपैंया रहेको सुन आज बजार खुल्दा ५२ हजार नौ सय रुपैंया पुगेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश विपरित तरकारी तथा फलफूलमा अवैध कर असुली
पोखरा, कात्तिक १२ — सरकारले तरकारी तथा फलफूलमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि तनहुँको कोत्रे तथा दमौली क्षेत्रमा राजमार्गमा ढाँट राखेर कर असुल्न रोकिएको छैन । तराइबाट पोखरासम्म तरकारी ल्याउने व्यवसायी अहिलेपनि कर तिर्नुपर्दा मर्कामा परेका छन् ।
स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन नगरे वैदेशिक लगानीको अर्थ छैनः प्रचण्ड
कैलाली, कात्तिक १२ — एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वदेशी लगानीलाई बढवा नदिएसम्म वैदेशिक लगानीले कुनै अर्थ नराख्ने बताउनु भएको छ । शनिबार बिहान कैलालीको धनगढीमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले लगानी भित्राउनु भन्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु जटिल रहेको बताउनु भयो ।
महासंघले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको श्वेतपत्र जारी गर्ने
काठमाडौं, कात्तिक १२ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्तरिक कारणले रुग्ण अवस्थामा पुगेका देशभरका २८ ठूला, मझौला र लघु जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । महासंघको हाइड्रो फोरमका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले २८ वटै जलविद्युत आयोजनाको अहिलेको अवस्थाका विषयमा तथ्यांक संकलन भइसकेकोले चाँडै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
घट्यो मिठाईको ब्यापार
काठमाण्डौं, कात्तिक ११ -यसवर्ष तिहारमा मिठाईको व्यापार घटेको व्यापारीहरुले बताएका छन् । अनुगमनको क्रममा धेरै मिठाई पसलमा फोहोर दुर्गन्ध र बासी मिठाईबाटै बिभिन्न परिकार बनाएको सार्वजनिक भएपछि व्यापार घटेको हो । पोहोरको तुलनामा कम मिठाई बनाएपनि थोरै बिकेकाले नोक्सान ब्यहोर्नुपरेको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
चाँदीबाट बनेका सामानको बिक्री बढ्यो
काठमाडौं, कात्तिक १० — यसपाली तिहारमा चाँदीबाट बनेका सामानको बिक्री राम्रो भएको व्यापारीहरुले बताएका छन् । तिहारको शुरुमा भाउ घटेका कारण पोहोरको तुलनामा व्यापार बढेको हो ।
दीपावलीको सामान किनमेल गर्न बजारमा भिड
काठमाण्डौं, कात्तिक ९ - दीपावलीको लागि सामान किनबेच गर्नेको चहलपहल बिहानैदेखि शुरु हुन थालेको छ । फूलमाला मसला सप्तरंगी टिका दियो मैनबत्ती लगायत तिहारमा प्रयोग हुने सामानको किनबेच बिहानै देखि शुरु भएको हो । खासगरी काठमाण्डूका असन ईन्द्रचोक मखन न्यूरोड क्षेत्रमा उपभोक्ताको भिड लाग्ने गर्छ ।
भदौसम्ममा देशलाई १७ अर्ब रुपैया नाफा
कमल पराजुली/उज्यालो, काठमाण्डौं, कात्तिक ८ -चालु आर्थिक बर्ष भदौ महिनामा नेपाल १७ अर्ब भन्दा धेरैले नाफामा गएको छ । राष्ट्र बैकले आज र्सार्बजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षो दोश्रो महिना सम्मको देशको बीत्तीय अबस्थाको प्रतिबेदनका अनुसार देश बाहिरिने भन्दा भित्रने पैसा १७ अर्ब २७ करोडले धेरै छ । यस्तो शोधानान्तर स्थिती गत बर्षयहि समयमा झण्डै ६ अर्बले घाटामा थियो ।
सुनचाँदीको भाऊ स्थिर
काठमाण्डौं, कात्तिक ८ - सुनचाँदीको भाउ मंगलवार पनि स्थिर छ । आइतवार र सोमवारको जस्तै मंगलवार पनि सुन तोलाको ५१ हजार २ सय ५० रुपैंयामा किनबेच भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । चाँदीको भाउ पनि तोलाको १ हजार ४० रुपैंयामा कायम छ ।
श्रम स्वीकृती लिनेको दुःख (अडियो सहित)
माधव दुलाल/उज्यालो, काठमाडौं, कात्तिक ७ - श्रम स्वीकृती लिन बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाण्डौंमा हिजो आज निक्कै भिड हुने गरेको छ । विभागका अनुसार दैनिक २ हजार व्यक्तिले श्रम स्वीकृती पाइरहेका छन् जसका लागि तीनवटा काउण्टर राखिएको छ । श्रम स्वीकृतिमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ठूलै चलखल गरिरहेको गुनासो पछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा श्रम मन्त्रालयले विदेश जानुअघि अनिवार्य रुपमा कामदार आफै उपस्थित भएर श्रम स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसै पनि अहिले दैनिक कम्तिमा १ हजा...
नेपालका ट्रेड युनियनहरुको दोश्रो सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु
काठमाडौं, कात्तिक ६ — नेपालका ट्रेड युनियनहरुको दोश्रो सम्मेलन आइतबार देखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । सम्मेलनमा संविधान निर्माणमा श्रमिकका एजेण्डा, श्रम बजार सुधार प्रक्रिया, ज्यालावृद्धि र न्यूनतम ज्याला सम्वन्धी अभियान, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र संचालन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
तिहार नजिकिँदै गर्दा फलफूलको आयात बढ्यो
काठमाडौं, कात्तिक ६ — तिहार पर्व नजिकिँदै जादा बजारमा फलफूलको आयात बढेको छ । स्याउ, केरा, नरिवल लगायतका फलफूलको आयातसँगै कारोबार पनि शुरु भएको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
भक्तपुरमा मुख्य सडक जोड्ने चार वटा पुल बन्ने
भक्तपुर, कात्तिक ५ — डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले यसवर्ष जिल्लाका मुख्य सडक जोड्ने चार वटा पुल बनाउने काम शुरु गर्दैछ । चाँगुनारायणबाट काठमाडौंको साँखु र चाँगुबाट काठमाण्डुको ईन्द्रायणी जोडने मनोहरा पुल बनाउने काम शुरु भएको कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाटले बताउनुभयो ।
अष्ट्रेलियाले नेपाललाई ९४ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने
काठमाडौं, कात्तिक ४ — अष्ट्रेलिया सरकारले नेपालका विभिन्न परियोजनाका लागि ९४ लाख आठ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । अष्टेलियन दुतावासको प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत प्राप्त यो रकम नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र संचार क्षेत्रका सात वटा परियोजनामा खर्च हुनेछ ।
नेपालमा लगानी गर्न भारतीय उद्योगी व्यापारीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
नयाँ दिल्ली, कात्तिक ४ — प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्योगी ब्यवसायीको साझा संगठन एफआईसीसी आई र सीआईआईका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।